रूपन्देहीमा ३९ जनामा डेंगुको संक्रमण
बुटवल- रूपन्देहीमा डेंगुका ३९ जना बिरामी फेला परेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, रूपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र कुमार गिरीका अनुसार सोमबारसम्म जिल्लामा विभिन्न अस्पतालमा ३९ जना डेंगु संक्रमित बिरामीको उपचार भइरहेको छ ।
भदौ पहिलो साताबाट रूपन्देहीमा देखिएको डेंगुको संक्रमण अहिले ३९ जना विरामीमा डेंगु ‘पोजेटिभ’ देखिएको छ । संक्रमित बिरामीमध्ये धेरै बुटवलका रहेको बताइएको छ । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा २२ जना बिरामीको र १७ जना विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गराइरहेको गिरीले लोकान्तरलाई बताए ।
‘वर्षातको समयमा डेंगुको संक्रमणले ठूला–साना सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरु प्रभावित हुन्छन्’ डा. गिरीले भने, ‘डेंगुको संक्रमण बालबालिकामा छिटो र सजिलै देखिने हुँदा अभिभावकलाई डेंगुको संक्रमणबारे जनचेतना हुनु अति आवश्यक छ ।’
वर्षाको मौसममा किटजन्य रोगहरुमा डेंगु पनि देखिने गरेको छ । उक्त लामखुट्टे सफा पानी जमेको ठाउँमा बस्छ र डेंगु संक्रमण फैलाउँछ । डेंगु भाइरसको कारण हुने संक्रमण हो । भाइरल ज्वरोका बिरामी बढसँगै डेंगु भएकाका बिरामीहरू पनि देखिन थालेका छन् ।
पूर्वी तराईका जिल्लामा फैलिएको डेंगुको संक्रमण प्रदेश पाँचका विभिन्न जिल्लामा पनि देखिएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटबलका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. कृष्ण खनालले अस्पतालमा दैनिक भाइरलका बिरामी आएपनि अहिले सम्म २२ जनामा डेगु पोजेटीभ देखिएको बताए खनालले किटको अभाव भएको र जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयबाट ७० पिस मात्र आएको बताए । अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामी दैनिक ५० देखि माथि आउने गरेको खनालको भनाइ छ ।
प्रमुख डा गिरीले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा २ सय पिस किट रहेको र त्यो लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भीम अस्पताल, भैरहवालाई दिएको बताए । डा. गिरीले सचेता फैलाउनु डेंगु रोगथामको महत्वपूर्ण कार्य हुने बताए । २०६९ सालमा रुपन्देहीमा डेंगुको महामारीको रुपमा फैलिएको थियो । गत वर्ष भने खासै रुपन्देहीमा डेंगुका विरामी देखिएनन् ।